कमजोर व्यवस्थापनका कारण ठाकुरराम बदनाम: विद्यार्थी नेता वर्णवाल | नेपाली पब्लिक कमजोर व्यवस्थापनका कारण ठाकुरराम बदनाम: विद्यार्थी नेता वर्णवाल | नेपाली पब्लिक
होमपेज / अन्तरवार्ता | शिक्षा |
सुरज खनाल २०७६, ५ माघ आईतवार १२:२७
वीरगञ्ज – वीरगञ्जको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस शिक्षा जगतमा गर्विलो ईतिहास बोकेको शैक्षिक धरोहर हो। विभिन्न आरोह–अवरोह पार गर्दै यो क्याम्पसले अझै पनि शिक्षाको ज्योती छरिरहेकै छ।
कुनै समय वीरगञ्जमा पञ्चायती तानाशाही व्यवस्था विरोधी आन्दोलनको केन्द्रविन्दु मानिने यो क्याम्पसले अत्यन्त प्रतिभाशाली र देशलाई नेतृत्व दिने क्षमता भएका व्यक्तित्वहरुको उत्पादन गरेको इतिहास छ।
तर, मुलुकमा शिक्षा र चेतनाको दीप बाल्ने ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तर समयसापेक्ष भने हुन सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा समाजवादी पार्टी निकट समाजवादी विद्यार्थी युनियनका केन्द्रिय सदस्य तथा ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थी नेता निखिल वर्णवालसँग नेपाली पब्लिकका लागि सुरज खनालले गर्नुभएको कुराकानी…
ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसको शैक्षीक गुणस्तर निकै खस्किसक्यो भन्ने कुराहरु सुनीन्छ नी?
यो कुरामा म विश्वास गर्दीन, किनभने ठाकुररामका शिक्षकहरुले विरगञ्जका सबै प्राईभेट कलेजहरुमा पढाई रहेका छन्। पहिले पनि यो अवस्था थियो र आज पनी छ। अब उनीहरुले बाहिर पढाउदाँ राम्रो हुने ठाकुरराममा नराम्रो कसरी हुन सक्छ?
हो, बरु व्यवस्थापनको कमी छ। क्याम्पस प्रशासन अव्यवस्थित तरिकाले, मनोपोली ढङ्गले अघि बढीरहेको छ। ज्सले गर्दा विद्यार्थीहरुले समस्या चाँहि झेल्नु परिरहेको छ।
विद्यार्थीहरुले नै समस्या भोग्नुपर्दा त्यसको असर अन्तत पर्ने शैक्षिक गतीविधिमा नै हैन र?
हुन त हो। तर, यसमा क्याम्पसको प्रोफेसर वा लेक्चररहरु भन्दा क्याम्पसको व्यवस्थापन समुहको दोष छ। पुस्तकालयको समस्या, कहिले कम्प्युटर ल्याबको समस्या।
बिबिए आएको एक वर्ष भईसक्यो अझै पनी ल्याबको समस्या भोगिरहेका छन् विद्यार्थीहरु। यो सबै मिलाउने जिम्मेवारी त क्याम्पस व्यवस्थापनको हो नि। तर, पनि विद्यार्थीहरुको भविष्यमा नै असर गर्नेगरी पठनपाठन अवरुद्ध भने हुन दिएका छैनौ।
मलाई लाग्छ निजि क्याम्पस सञ्चालक र शैक्षिक माफियाहरुले ठाकुररामको शैक्षिक गुणस्तर खस्कियो भनेर हल्ला फैलाएर भ्रम सृजना गर्न खोजिरहेका छन्।
भनेपछी ठाकुरामको शैक्षीक गुणस्तर भरोसायोग्य छ?
हो, एकदमै भरोषायोग्य छ। यो कुरा बिबिए र मास्टरको सेमेस्टर प्रणालीको रिजल्ट हेर्दा पनी थाहा छर्लङ्ग हुन्छ। ठाकुररामले राम्रो गरीरहेको छ र पहीला भन्दा अहीले धेरै सुधार भएको छ।
देशकै पुरानो मध्यको एक ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसको व्यवस्थापन यती कमजोर हुँदा तपाई विद्यार्थी नेताहरु के गरेर बसिरहनुभएको छ?
हामीले व्यवस्थापन पटक–पटक सचेत गराईरहेका छौँ। अब त्यहाँ पनी विभिन्न पक्षका, विभिन्न व्यक्तीका मान्छेहरु भएको हुनाले अली हामीलाई पनी गाह्रै हुन्छ। तर, हाम्रो संगठनबाट हामीले सचेत गराउन खोजेका छौँ।
विभिन्न मागहरु राखेर, कार्यक्रमहरु राखेर विरोधमुलक कार्यक्रमहरु पनी गरेका छौँ। केही उपलब्धीहरु पनि भएका छन्।
हामीले त क्याम्पसको शैक्षिक वातावरण बनाईरहनका लागि सांगठनिक रुपमै पनि काम गरिरहेका छौ। विद्यार्थीहरुको स–साना समस्याहरु निराकरण गर्न पहल गरिरहेका छौँ। जस्तै ट्वाईलेटकै समस्या थियो।
वीरगंज महानगरपालिकाको सहयोगमा करिव १० लाख खर्च गरेर ट्वाईलेट मर्मत र निर्माणकार्य भवन रंगरोगन मेरो पहलमा नै भएको हो। सरसफाईसम्म आँफैले गराएको छुँ। स्वच्छ खानेपानीको लागि खानेपानी मेसीनको व्यवस्था गराए।
यतिमात्र होईन, रात्री कक्षा सञ्चालनमा समस्या नहोस भनेर लाईटको व्यवस्थापन पनि गर्ने अन्तिम तयारीमा छुँ। यसको पनि सबै प्रकृया पुरा भईसकेको छ, लाईट जोड्न मात्र बाँकी हो।
क्याम्पस व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनको लागि तपाई सबै विद्यार्थी संगठनहरु एक भएर कहील्यै दबाब दिनुभएको छ?
हामी पहीला पनि यस बिषयमा बसेको छौँ। हामी प्रतिबद्ध पनी छौँ। तर के छ भने क्याम्पसमा प्रशासनको भुमिका नै निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन्। किनभने क्याम्पस प्रशासन भनेकै पार्टीको नेतृत्वबाट चलीरहेको छ।
अहीलेको यो कोटा सिस्टममा, भागबन्डामा क्याम्पस चिफ नियुक्ति गर्ने परिपाटी छ। अब आफुँअनुकुल व्यक्तिहरुको मात्र नियुक्ति हुँदा नै समस्या निम्तिएको हो।
यस बिषयमा अरुको त म भन्न सक्दिन् तर मेरो संगठनले सकरात्मक नै काम गरेको छ। क्याम्पस प्रशासनमा हाम्रो मान्छे नहुँदा पनि हामी विद्यार्थीहरुको हितप्रति प्रतिवद्ध छौँ।
यो सब कुरा गरिरहँदा विद्यार्थीहरुको भविष्यमाथी खेलवाड भएजस्तो लाग्दैन तपाईलाई?
विद्यार्थीहरुको भविष्यमाथी खेलवाड कुनै पनि हालतमा हुन दिने छैन्। त्यसको लागी जे गर्नु पर्छ, जसरी गर्नुपर्छ म तयार छुँ। म यति कुरामा ढुक्क छु की विद्यार्थीहरुले आफ्ना समस्या लिएर आउनुपर्यो, अगाडी आएर भन्नुपर्यो। क्याम्पस प्रशासनले समाधान गरिदिएन् भने म आफैँ पहल गरेर हुन्छ की आफैँ गरेर हुन्छ म गराउछुँ।
‘अस्तव्यस्त ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसलाई एक…